Ryan Giggs oo sharraxaad yaab leh ka bixiyey inuu sii ciyaarsiiyey Daniel James oo xalay Miyir daboolmay… (Muxuuse yiri dhankiisa xiddiga Man United?) – Gool FM
Haaruun October 14, 2019
(Manchester) 14 Okt 2019. Macallin Ryan Giggs ayaa sharraxaad yaab leh ka bixiyey inuu sii ciyaarsiiyey Daniel James oo miyir daboolmay kulankii xalay, xilli xiddiga Manchester United uu dhankiisa ka hadlay wixii dhacay.
Waxa uu sheegay Ryan Giggs in Daniel James uu jilliin sameeyay inkastoo kaamirooyinki qabteen xiddiga garabka ka ciyaara oo miyir-daboolmay kulankii ay xalay la ciyaareen xulka Croatia.
Laacibka xulka qarnaka Wales iyo koxoda Manchester United ee Daniel James ayaa si xun dhulka ugu dhacay kaddib markii ay ku dhaceen labo xiddig oo ka tirsan xulka Croatia.
Intaas kaddib James ayaa cawska garoonka la jiifay dhowr daqiiqadood sida inuu miyir-daboolmay.
Waxaada caafimaad ayaa garoonka orod ku galay si ay u caawiyaan xiddigan ka hor inta uusan James jiifka ka istaagin oo uusan sii wadanin inuu ciyaaro.
Inkastoo la ogyahay inay qalad tahay in ciyaaryahan la sii ciyaarsiiyo kulankan iyadoo ay jug madaxa ka soo gaartay oo uu miyir-daboolmay ayaa haddana tababare Ryan Giggs waxa uu difaacay go’aankiisa uu garoonka ugu sii hayey ciyaaryahanka kulankii xalay.
Kaddib kulankii barbaraha 1-1 ku dhammaaday ayuu macallin Ryan Giggs yiri: “Daniel James dhulka ayuu ku dhacay, markii uu dhulka jiifay waxay ka aheyd jilliin, balse shaqaalaha caafimaadka ayaa u tagay, baaris deg deg ah ayay ku sameeyeen, waxaana sidoo kale baarnay waqtigii nasashada, waana uu fiicnaa.”
Dhinaca kale Daniel James ayaa isna sharaxaad ku bixiyay inuu miyir-daboolmay waxaana uu isagoo la hadlayey Sky Sports uu beeniyey inuu miyir-daboolmay waxaana uu yiri: “Waxaa jiray taakallo duulaya laakiin waa filan kartaa ciyaaraha nuucaan oo kale ah.”
“Anigu waan fiicanahay, madaxa ayuu iiga dhacay laakiin nasiib wanaagsan ma’aanan miyir-daboolmin.”
Manchester United oo indhaha ku haysa inay la soo wareegto xiddiga kooxda Juventus ee Miralem Pjanic